लकडाउन खोल्न माग गर्दै हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूको ट्रम्पले गरे प्रशंसा :: Setopati
लकडाउन खोल्न माग गर्दै हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूको ट्रम्पले गरे प्रशंसा
एजेन्सी मिसिगन, वैशाख २०
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार जारी कडा लकडाउन खुकुलो बनाउने माग गर्दै मिसिगनको राजधानी भवनमा प्रवेश गरेका केही प्रदर्शनकारीहरूको समर्थन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूमा केही हतियारधारी पनि थिए।
प्रदर्शनकारीले गर्भनर ग्रेचेन व्हिटमरलाई लकडाउनका कडा प्रतिबन्धहरू हटाउन माग गरेका थिए।
'मिसिगनका गभर्नरले थोरै केही दिनुपर्छ र आगो निभाउनु पर्छ,' ट्रम्पले ट्विट गरेका छन्, 'प्रदर्शनकारीहरू धेरै राम्रा मानिस हुन्। तर रिसाएका छन्। उनीहरू आफ्नो जीवन फिर्ता चाहन्छन्, सुरक्षित रूपमा! उनीहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् र सम्झौता गर्नुहोस्।'
बिहीबार लान्सिङ भवनको लबीमा जम्मा भएका दर्जनौं प्रदर्शनकारीले मिसिगनको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा जाने अनुमति मागेका थिए।
तर, राज्यको प्रहरीले उनीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न रोकेको थियो।
'अमेरिकन प्याट्रोयट र्‍याली' नाम दिइएको सो प्रदर्शनलाई 'मिसिगन युनाइटेड' भन्ने नाममा एउटा समूहले आयोजना गरेको थियो।
'हामी कोरोना भाइरस महामारी जस्ता कुनै पनि कारणले गर्दा हाम्रो असिमित अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सहमति जनाउँदैनौं,' उक्त समूहले आफ्नो निजी फेसबुक पेजमा भनेको छ। सो पेजमा ८ हजार ८ सयभन्दा बढी सदस्य छन्।
यो महिना प्रदर्शनकारीहरूले राज्यमा लकडाउनको प्रतिबन्ध हटाउने माग गरेको यो दोश्रो पटक हो। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्यांक अनुसार यस राज्यमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ३५ सय बढीको ज्यान गएको छ।
अप्रिल १६ मा भएको प्रदर्शनमा पनि उनीहरूमध्ये केही सशस्त्र रूपमा सहभागी भएका थिए।
यसको एकदिन पछि ट्रम्पले उनीहरूको समर्थन गर्दै 'लिबरेट मिसिगन!' भनेर ट्विट गरेका थिए।
ट्रम्पको सो ट्विटको व्यापक रुपमा आलोचना भएको थियो। ट्रम्पको सो ट्विटलाई एक गभर्नरले 'घरेलु विद्रोह पैदा गर्ने र झुट फैलाउन' मद्दत गर्ने किसिमको भएको आरोप लगाएका थिए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७, १२:२५:००
एनआरएन अभियानमा गौरीको अलग पहिचान, महासचिवमा उमेदवारी दिने
एमसीसीको निर्णय समयमै नभए मुलुकमा ध्रुविकरण अझ बढ्ने : अध्यक्ष पोखरेल
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघको अघ्यक्षमा विकासराज न्यौपाने निर्वाचित
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ(नेजा) मा नयाँ नेतृत्व छानिँदै
विपीको मन्त्र-सस्तो सफलता नै जीवन होइन
मजदुर र रूवाखोलाका शेर